God Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah Ilaah
In si hagaagsan ha iigu si aad u hesho wax soo gabagabeeyay, Waxaan u baahanahay dareenka ah in aan wax grand samaynaya. "Laakiin haddii aan qashinka this qaadato, nin qashinka badbaadiyey doonaa?"Waxaan ahay nin sawir weyn, iyo inaan dhif keentay in ay faahfaahin ama hawlaha daalin. Nasiib darro, tafaasiisha iyo hawlaha daalin yihiin inta badan ee nolosha dhabta ah. Tani waa sababta aan ku dhibtooday…
Halkan khudbad Waxaan dhawaan wacdiyey on Sabuurradii 95:10-11. My 3 dhibcood way fudud yihiin:
waxaan. Dembigu dhirfinaya Cadho Ilaah
II. Dembigu waa Jidka Alernate ah
III. Dembigu noo hayaa nasasho Ilaah ka
Waan ku baryayaaye, tani waa dhiirigelin ah in aad
Waxaan doonayaa in aan bilaabi by reading xigashooyin qaar ka mid ah. Sidaas oo keliya si wacan u dhegeysto iyo ka fikir haddii aad ku raacsan tahay waxa uu sheegay in.
"Cadho deggan oo keliya in laabta nacasyada." - Albert Einstein
"Cadho waa waalli gaaban." - Horace
"Wax kasta way bilaabatay cadho dhamaado ceeb." - Benjamin Franklin
"Marna wax ku sameeyo [out of cadho], waayo, waxaad samayn doontaan wax walba oo qalad ah. " - habayn
Cadho waa mid ka mid kuwa sifooyin qof aan caadi dooni. mid ka mid No jecel cadhadii. Cadho keenaysaa in qadhaadh oo haysta cadawtinimo. Cadho keenaysaa in go'aano xun. Cadho mararka qaar xitaa keenaysaa in rabshadaha. Dadka sida caadiga ah ma doonayo in aan noqon agagaarka qof duusho off xamili la joogo wax kasta oo. Waxa ay u muuqataa yara deganayn.
Laakiin halkan aan su'aal: Ilaah isu cadhoonina? Ma jiraan wax ka dhigi karaa Ilaaha reer waalan ee koonkan karkaraya? Well Waxaan qabaa our text caawa ka qaban doona su'aasha in.
Ma aha in aad u noqon lahayd ila. In Baxniintii 17, dadka reer binu Israa'iil Ilaah Imtixaami simaha sida haddii aanay isaga la aamini karin. Ka dib wax walba oo uu ku sameeyey iyaga, waayo,, iyaga samaynta dadkiisa, iyaga samatabbixinaya addoonsiga, bixinta iyaga iyo wixii la mid ah, ay weli ma isaga ku kalsoon tahay. Sidaas daraaddeed waxay la dagaallami…
Ma waxaad beeniyay Ilaaha Caalamka? Rumayso ama ha rumaysan, tani waa su'aal muhiim ah oo dhan oo naga mid ah in aad ka fikirto. Waa ay iska cadahay in Kitaabka in nolosha weligeed ah waxaa si xor ah siiyey kuwa isku halleeya Eebe iyo injiilka rumaysan, iyo xukun kaliya waxaa lagu fuliyaa kuwa ka gaaloowday. Laakiin waxaa jira in ka badan hal hab oo ay Ilaah u diidi. Halkan waxaa ku qoran saddex inaan helay Axdiga Cusub.
1. Ismoogaysiinta in Ciise waa kan Waxa uu sheegay in uu ahaa
“Yaa waa beenaaleh, laakiin kii beenisay in Ciise yahay Masiixa,? Taasi waa ka geesta ah, kii oo beenisay Aabbaha iyo Wiilka. mid ka mid No kii Wiilka beenisay leeyahay Aabbaha. Ku alla kii qirta Wiilka Aabbaha ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay.”
Waxaa jira dad badan oo dunida maanta ka fikiraan naftooda sida dadka ruuxi ah ama xitaa diinta. Waxay aaminsan yihiin in Ilaah jirta, oo ay isku dayaan in ay isaga caabudaan hab iyaga u gaar ah. Waxaa laga yaabaa in ay xitaa Ciise arko sida macallin weyn ama nebi ka yimid Ilaah. Laakiin haddii aanay rumaysanahay in Ciise yahay kan uu sheegay in uu yahay, waxay yihiin diido.
Sida aynu xaqa ah ee Ilaah hortiisa waa? Waxaa runtii waa in ixtiraam la mid ah taas oo Masiix dembi. Waayo, isagu wuxuu qiyaasayey in hab meesheenna, inuu noqdo dembiyada ku jira qolka, oo laga qaban laga yaabaa in la sida mid dembi leh, ma dembiyo isaga u gaar ah, waayo,, laakiin kuwa dadka kale, maxaa yeelay, wuxuu ahaa saafi ah oo ka reeban qalad kasta, oo laga yaabo adkaysan cadaabka in uu ahaa sababo la noo- ma naftiisa u. Waa in si la mid ah, xaqiiqa, in aynu nahay hadda xaqa ah isaga in- ma in la ixtiraamo of our qanacsanaanta haya'ad caddaaladda Ilaah shuqullo noo gaar ah, laakiin sababta oo ah oo xidhiidh la leh xaqnimada Masiixa la inagu xukumay, taas oo aan ku riday on by iimaanka, in kuweenna noqdo.
si tartiib ah kan akhri oo ha dego ee! Waxaan soo quote this halka diyaarinaya aan fariin ku saabsan 2 Corinthians 5:18-21 Shirka Campus Qaranka Outreach. walax Good